« Amboaran’ny UFFOI » : Hitsapa lalao iraisam-pirenena faharoa ny Cnaps
Taorian’ny fihaonana teo amin’ny Cnaps Sport, tompondakan’i Madagasikara, sy ny Motor Action avy any Zimbaboe…
… teo amin’ny « Champions league » Afrikanina, dia hiatrika ny lalao iraisam-pirenena faharoa etsy Mahamasina izy ireo amin’ny alahady izao.
ny USS Tamponnaise, izay efa nandresy azy ireo tamin’ny alalan’ny isa 1 no ho 0 tany La Réunion no hifamerina indray amin’izy ireo eo amin’ny lalao famaranana miverina ho an’ny fiadiana ny amboaran’ny Ranomasimbe Indianina amin’izany.
Miangavy mafy ireo mpijery hanohana araka izay takatry ny heriny an’ity solontenan’i Madagasikara ity ny mpitantana ny Cnaps Sport.
« Amin’ity lalao ity dia i Vombola Jeannot no hisahana ny andraikitry ny kapiteny. Efa ao anatin’ny fahavonana tanteraka ny mpilalao rehetra amin’izany lalao izany ary heverina ho toy ny tsy misy ny fampilalaovana an’i Baggio, izay mbola tsy mazava tsara ny fifidrana iraisam-pirenena ho azy », hoy ireo mpitantana ny ekipan’ny Cnaps Sport, omaly, teny amin’ny foiben-toerany.
Isan’ny nantsoina hanampy tosika ity tompondakan’i Madagasikara ity i Jean Marie Razafiarison, izay efa niaraka nitondra ny Barea latsaky ny 20 taona tamin’i Titi Rasoanaivo, ka nahazoan’izy ireo ny amboaran’ny Cosafa Cup tamin’ny taoa 2005.
Isan’ireo mpilalao efa nentin’izy ireo tamin’izany i Fenosoa, izay vodilaharan’ny Cnaps amin’izao. « Hery lehibe ho anay ny fahatongavan’ireo mpanohana betsaka amin’ity lalao famaranana ity », hoy izy ireo.